भाेकाे हुँदा बढी रिस किन उठ्छ ?
एउटा बिरालाेकाे याे तस्वरी ह्याङ्ग्री बिरालाे भन्दै सामाजिक सन्जालमा केही पहिले भाइरल भएकाे थियाे ।
के कहिल्यै तपाईंले ध्यान दिनुभएको छ ? जब भोक लाग्छ तब किन रिस उठ्न सुरु हुन्छ ? सानो कुरामा पनि मुख फुल्न थाल्छ । यस्तो अवस्थामा कसैले केही सोधिहाल्यो भने लाग्छ, उसको शिरमा नै कुनै वस्तुले हिर्काइदिउँ । सामाजिक संजालको यो समयमा भोक र रिसलाई लिएर एउटा नयाँ अंग्रेजी बढेको छ । यसको नाम हो ह्यांग्री अर्थात् जसलाई भोक अर्थात् हंगर र रिस अर्थात् एंगर शब्दबाट बनाइएको हो ।
के कारणले मान्छे भाेकाउँछन् ?
किंग्स कलेज अफ लण्डनको न्युट्रिशियन एक्सपर्ट सोफी मेडलिन भन्छिन्– लामो समयसम्म मान्छेलाई थाहा हुन्छ कि भोक लाग्दा मुख फुल्ने र रिस बढ्ने हुन्छ । अब सामाजिक संजालले भोक र रिसको मिश्रणबाट ह्यांग्री शब्द बढाएको छ । योसँगै यसमा विज्ञानको ध्यान अरु बढेको छ । अगाडि सोफी भन्छिन्, जब हाम्रो शरीरममा चिनीको मात्रा कम हुन्छ तब कर्टिशोल र एड्रिनेलिन जस्ता हर्मोनको मात्रा बढ्न जान्छ ।
यी हर्मोनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हाम्रो लड्ने क्षमतासँग हुन्छ । जसको असर दिमागमा पर्न थाल्छ । यसको कारण भनेको हाम्रो शरीरका तन्त्रिका यानी न्युरोनबाट निस्कने केमिकल न्युरोपेप्टाइड्स यी केमिकलको मात्रालाई हाम्रो दिमागमा नियन्त्रित गर्छ । जुन केमिकलले हामीलाई भोक लागेको आभाष गराउँछ । रिस पनि सोही केमिकलका कारण नै उठ्छ ।
सोफीका अनुसार भोक लाग्दा हामीलाई रिस उठ्ने कारण यही हो । हामी सबैले भोक लाग्दा आँतको ऐठनका साथ मुख फुलेको महसुस गरेका हौंला । यही सन्दर्भमा मिडिया धेरैजसो यो अवस्था महिलाहरू धेरै देखिने बताउँछ । तर, यथार्थ भने यो होइन । गत महिना विन्टर ओलम्पिकको समय अमेरिकी खेलाडी क्लोय किमले ट्वीट गर्दै आफ्नो भोकबारे बताएका थिए । उनले ट्वीटमा आफू नास्तामा स्याण्डवीच खाएर पाउन पाएको भए हुने लेखेकी थिइन् । यथार्थ के हो भने महिलाको सट्टा भोक लाग्दा धेरै रिसाउनेमा पुरुष पर्छन् ।
भोक लाग्दा पुरुषलाई धेरै रिसाउँछन्
सोफी मेडलिनले मानिसको दिमागमा न्युरोपेप्टाइको असर महसुस गर्नका लागि धेरै रिसेप्टर हुन्छन् । यिनमा ओस्ट्रेजन जस्तो हर्मोनको असर हुन्छ । किनकि, टेस्टोस्टेरनको सम्बन्ध योसँग रहेको पाइन्छ ।
भोकले बिगार्न सक्छ सम्बन्ध
भोक र रिसको ककटेल अर्थात् ह्यांगरले सम्बन्धमा पनि नराम्रो असर पार्न सक्छ । सन् २०१४ को एक अनुसन्धान अनुसार रगतमा सुगरको मात्रा घट्दा विवाहित जोडीको सम्बन्धमा तनाव थपिन्छ । र उनीहरु प्रायः हिंस्रक बनिदिन्छन् । विशेषतः विवाहित महिला भोक लाग्दा आक्रामक हुने गर्दछन् । यस्ता महिलाका श्रीमानले उनीहरूको रिसको शिकार हुनुपर्छ । यस अनुसन्धानले के पुष्टि गर्छ भने, यदि पत्नीलाई भोक लागेको खण्डमा अरु काम छोडेर भएपनि उनको भोक शान्त पार्नतिर लाग्नुपर्छ । यो सल्लाह शरीर र सम्बन्धका लागि एकदमै जरुरी हो ।